Muxuu salka ku hayaa khilaaf-ka maamulka masjidka Quba ee Soomaalida Amsterdam? - Caasimada Online
Home Dunida Muxuu salka ku hayaa khilaaf-ka maamulka masjidka Quba ee Soomaalida Amsterdam?
Muxuu salka ku hayaa khilaaf-ka maamulka masjidka Quba ee Soomaalida Amsterdam?
Amesterdam (Caasimada Online) – Muddooyinkii u dambeeyey waxaa sii xoogeysanayay hadal-haynta khilaaf ka dhextaagnaa maamulka masjidka Quba ee ku yaal Magaalada Amsterdam ee waddanka Holland.
“Markii hore waxaa KVK-ga laga saaray nin C/risaaq la yiraa, kana mid ah maamulka masjidka oo Tilburg degan, halkaas ayuu khilaafku ka curtay ilaa markii dambe isagana laga saaray Sheekh Suldaan oo ka mid ah maamulka sare, xaaladu hadda waxay maraysaa meel aan laga filayn dadkan culimida ah ee haya amaanadii dadka ay u dhiibteen,” ayuu yiri Sheekh Cali oo ka mid ah culimada masaajidka ku xiran, isaga oo intaasi raaciyay in marka loo eego dhumucda khilaafka ay suurtagal tahay in qabiil uusan ka marneyn.
Dhanka kale, waxaa jira dedaalo ay wadaan waxgarad kala duwan, oo ku soo baxay xiisada masjidka, waxaanna dedaaladaasi lagu raadinayaa sidii la loo qaboojin lahaa xiisada, haddii se xiisadu sii socota waxaa suurtagal ah in masjidka ay kala laabtaan kalsoonidii ay ku qabeen dad badan oo Soomaali ah.